Fitaovana fiaraha-miasa amin'ny masoivoho: SocialBridge
Paikady fanaovana atidoha izany; fitantanana, fandaminana na fizarana fanentanana amin'ny marketing; fanatanterahana tetikasa; na mifandray fotsiny amin'ny olona manerana ny rojo, ny fiaraha-miasa no anaran'ilay lalao. Inona no fomba tsara kokoa ahafahan'ny tsirairay manompo tena ny rakitra, antontan-taratasy, na fampahalalana lehibe hafa takian'izy ireo nefa tsy mila mihazakazaka mankany amin'ny console afovoany na miankina amin'ny hafa handefasana ny vaovao?
SocialBridge mamela ny fananganana vondron'olona monina an-tserasera azo ampifanarahana amin'ny rahona ho an'ny tetik'asa tsirairay na filàna manokana, miaraka amin'ny tahiry sy endrika, ary fifehezana fidirana sy safidy fiaraha-miasa. Matetika, ny tena sandan'ny famokarana dia miafina ao anatin'ny asa mahazatra. Ny Desktops afovoany dia mandeha ho azy ary manao asa mahazatra tsy tapaka toy ny fanavaozana, fampahatsiahivana, fahazoan-dàlana hiditra sns.
Ny orinasa dia manolotra kinova samihafa amin'ny SocialBridge. SocialBridge ho an'ny masoivoho dia natao ho an'ny masoivoho mpamorona sy ekipa izay miara-miasa matetika amin'ny mpanjifa. SocialBridge for Enterprise dia manambatra ireo sandry isan-karazany amin'ny orinasa, miparitaka amin'ny fotoana sy toerana, tsy miankina amin'ny departemanta IT. SocialBridge Professional dia manome ho an'ny orinasa kely sy ny singa tsirairay izay rehetra ampiasain'ny orinasa matihanina lehibe.
Ny SocialBridge dia ahafahan'ny orinasanao misafidy na orinasanao manao:
Ataovy mandeha ho azy ny fizotran'ny asa
Avereno jerena, omeo hevitra ary ankatoavy ny porofo an-tserasera
Atsangano haingana ny mpanjifa sy ny tetikasa miaraka amin'ny maodely efa vonona
Araho ny hevitry ny mpanjifa, ny fanapahan-keviny ary ny fisoratana anarana hialana amin'ny lesoka lafo vidy sy ny sakoroka
Midira amin'ny satan'ny tetikasa sy rakitra ao anaty Internet, amin'ny fotoana rehetra
Tsory ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa miparitaka eran'izao tontolo izao, mpanjifa, mpiasa tsy miankina ary masoivoho mpiara-miasa
Ny SocialBridge dia mamela ihany koa ny fampidirana antoko fahatelo, miaraka amin'ny fiarovana avo lenta ary manana fotoana 99.98 isan-jato.
Tags: fahafahana misafidyDesktop afovoanyfiaraha-miasasocialbridge
Nahoana ny olona no Soraty Online Reviews?